Ngokusho ulwazi olunikezwa izinsiza-Internet, inombolo kahle esikhulu labaqashi (28%) ngonyaka ka-2012, ihlele ukuthi kungenzeka ukwenza inqubo enjalo njengoba indexation kwabasebenzi amaholo.
Inqubo ukwehla kwentengo imali kuholela ekulahlekelweni nakwentiwa. Ngenxa yalokho ukuba khona esilinganayo uthenge izimpahla ezimbalwa kanye nezinsizakalo. Ngakho-ke, kulo lonke izwe ophucukile, le nqubo ilawulwa ukubeka iziqiniseko isimo emkhakheni zokukhiqiza inkokhelo yezakhamuzi ukusebenza. isiqinisekiso njalo is amaholo indexation, okuhlanganisa izinyathelo zokwandisa okuqukethwe sayo sangempela. Kufanele kwenziwe kuphela ngumqashi, ngesisekelo kwezinkambiso zomthetho kanye nesimo esingokwezimali ekhona.
Okunye amaholo indexation yesiqinisekiso inikezwe ngendlela amaholo (amaholo), esibekwe umbuso. Abaqashi banqatshelwe ukusetha iholo ukuthi kwakuyoba ngezansi ukuthi ezingeni. Lapho sitholakale abasebenzi yizinkokhelo ngezansi amaholo ikhanda inkampani lenkampani kuyodingeka bakhokhe inhlawulo, kodwa ukukhulisa inkokhelo esiphansi. Ukulawula ukulandelwa kwemithetho kanye ukubandakanywa umqashi sezomthetho ezenziwe abasebenzi zomsebenzi ukuhlolwa.
Yenkomba inkokhelo ziyabonisa futhi izithelo zawo kwabo bonke abasebenzi, ngakho kufanele usebenzise izinto okuyinto ukwandisa tariff yabo amazinga. Ukunakwa kufanele zikhokhelwe ukubhaliswa efanele yokwanda inkokhelo futhi bayiyise akhawunti lapho kubalwa izinkokhelo okwalandela. Yilokho kanye umehluko phakathi nangenkomba kusuka ukwanda elula, bengangesabi mina, okwakuyothi ngaphansi kwawo ukunyuselwa amaholo (amaholo isilinganiso) abasebenzi ngabanye.
Esinye isibonelo ukwenyuka elula - ukukhuphuka angakholelwa iholo abasebenzi amayunithi ngabanye nezinto ezahlukene.
Umqashi ubophekile ukuba enze kokufakwa ohlwini. Ngokusho Federal eNkantolo yezabaSebenzi kanye balamule yoMthethosisekelo Russian indexation ochwepheshe iholo kufakwe yemfanelo yomqashi. Lona umnyombo walokho welithi "isimo isiqinisekiso": umqashi - umuntu obambe esivuna labasebenzi, futhi ngeke ngaphansi kwanoma yiziphi izimo ukuthatha isinqumo ukushintsha noma ukwesulwa iziqiniseko wamemezela isimo.
Nokho, izishaya akazange kulibona izikhathi okusebenzela mshini ukugcwaliseka iziqiniseko, ezifana inqubo nemibandela ekwenzeni lokho okuhleliwe.
Wobudlelwano Ikhodi inqubo nangenkomba
Ngokwe-Labour Ikhodi amaholo indexation wenziwa izinhlangano kwesabelomali ngokulandelana, okuyinto lihlelwe zabasebenzi zamanje izenzo zokulawula. Nokho, okwamanje oda indexation inkokhelo abachazwa kunoma isiphi isenzo esisemthethweni esiphathelene nomthetho wabasebenzi. Ngakho-ke, akucaci yini imithetho kufanele ugxile enkingeni obhekene yomqashi ku nangenkomba.
Izinhlangano isabelomali nangenkomba wenziwa ngesisekelo oda abafanele, ekhishwe Uhulumeni waseRussia.
Ezinhlanganweni commercial - ngesisekelo imithetho yabo. Ekusebenteni, njengoba sazi, ama-index amaholo kuphela ikhona Izivumelwano of amabhizinisi ukuthi bajoyine izivumelwano umkhakha. Amabhizinisi amancane, uma kungazelelwe kuyakhulunywa inkontileka, ngokuvamile kuhlangene imfuneko mayelana nokuba khona umthamo womqashi zezimali nekuwusebentisa.
Ukuze Ezimweni ezinjalo, kukhona incwadi Rostrud lapho ochwepheshe wenhlangano ukuncoma izinguquko enhlanganweni amadokhumenti uma kungukuthi echazwe indexation.
Isilinganiso Quick: ifomula ukulinganisela. izinkomba solvency
Ukukhiqizwa izindawo - kuyingxenye ebalulekile ekukhiqizweni
Indlela Buyisela ikhasi, "In Touch"?
KwaseSaransk, perinatal isikhungo: ukubuyekezwa odokotela, izingcingo. Yini ukuletha enkabeni perinatal e kwaseSaransk?